MUUQAAL: Maxaa ka jira in dowaladu ay horay marxuum xildhibaan Osman Boqore uga reebtay ilaaladiisii xog cusub. – Xeernews24
MUUQAAL: Maxaa ka jira in dowaladu ay horay marxuum xildhibaan Osman Boqore uga reebtay ilaaladiisii xog cusub.
24. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Allah u naxariistee kadib dilkii xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in marxuumka horay looga reebay ilaaladiisii isla markaana ay taasi sababtay in si fudud loo weraro, waxase ka hadlay habdhowraha guud ee baarlamaanka Soomaalia Xildhibaan Maxamed Cabdlaahi Xasan Nuux.
Xildhibaan Nuux ayaa sheegay in xildhibaan walba xur u yahay ilaalada u ku kalson yahay isla markaana aysan waxba ka jirin wararka been abuurka ah, sidoo kale Xildhibaan Seynab Caamir oo kamid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka oo hadda ku sugan Dalka Jabuuti ayaa ka hadashay Taariikhda Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre.
Xildhibaan Boqore waxaa uu ku dhashay Dalka Jabuuti,waxaana xiligii gobanimo doonkii uu ka mid ahaa dadkii Faransiiska ay ka soo masaafuriyeen dalkaasi ee la keenay Magaalada Muqdisho,isagoo xiligaas noqday Ciidan kuna gaadhay Darajada Korneel.
Waxaa uu kamid ahaa Xildhibaanadii ugu horeeyay ee dowladii Carta laga soo doortay,wuxuu noqday Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Gobolaha Shacabka markii uu Cabdullaahi Yuusuf Axmed dalka ka noqday Madaxweyne.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/Osman.jpg 282 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-24 08:06:272019-02-24 08:06:27MUUQAAL: Maxaa ka jira in dowaladu ay horay marxuum xildhibaan Osman Boqore uga reebtay ilaaladiisii xog cusub.
Daawo Murxuun xildhibaan Osman Boqore oo horey uga digey in la dili doono Tirakoobka iyo xadaynta horteed maxaan ubaahannahay?